The Ab Presents Nepal » हाम्रा हिरो कुलमानलाई पदबाट हटाउने तयारी: पुरै पढेर सियर गर्नुहोला !
हाम्रा हिरो कुलमानलाई पदबाट हटाउने तयारी: पुरै पढेर सियर गर्नुहोला !
नेपालमा लोडसेडिङ हटाएर सबैको हिरा बनेका कुलमान घिसिङबाट पूर्वमाओवादी नेताहरू आजित बनेका छन् । तत्कालीन मन्त्री जनार्दशन शर्माले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।
अहिले उनै शर्मालाई घिसिङ घाँडो बनेका छन् । घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउन शर्माले अहिले पनि जोडबल गरेका छन् । तर सकेका छैनन् अहिलेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि घिसिङलाई हटाउन चाहन्छन् ।
पुनले पनि घिसिङलाई हटाउन सकेका छैनन् । मिडियासर्वसाधारण, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर घिसिङ छाएका छन् । उनलाई चलाउनेवित्तिकै सरकारविरुद्ध अर्कै खालको माहोल बन्छन् ।घिसिङलाई हटाउन उर्जामन्त्री पुनले नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विन्ती चढाइ सकेका छन् । प्रचण्ड घिसिङलाई हटाएर उनीभन्दा असल मान्छेलाई ल्याउन खोजेका छन् ।
घिसिङले आफूविरुद्ध लागेको सूचना पाउनेवित्तिकै कुनै न कुनै फण्डा निकालिहाल्छन् । त्यति मात्रै होइन आफ्ना विरोधीको समाचार मिडियाबाट निकाल्छन् । लोडसेडिङ गरेर राष्ट्रिय हिरो बनेका घिसिङ पछिल्लो समयमा कमिशन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन् ।
घिसिङका कारण राम्रा कार्यक्रम र प्रोजेक्टहरू भारततिर गएका छन् । घिसिङले भारतको चाहनाअनुसार काम गर्ने गरेको उर्जामन्त्री पुनको आरोप छ । घिसिङले चीनको चाहनाअनुसार काम गर्न नचाहेको आरोप छ ।उर्जामन्त्री पुनका एकजना सल्लाहकार चीनको लागि सिंहदरबारभित्र बसेर काम गर्दै आएको चर्चा छ । सल्लाहकारको दवावमा उर्जामन्त्री पुनले घिसिङलाई हटाएर आफू अनुकूलको काम गर्न खोजेको आरोप छ ।